विदेशिएका नेपाली रेमिट्यान्सको माध्यम मात्रै होइनन्, परिवर्तनका आधार पनि हुन् | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
विदेशिएका नेपाली रेमिट्यान्सको माध्यम मात्रै होइनन्, परिवर्तनका आधार पनि हुन्
चैत २६, २०७६ बुधबार १३:२६:४४ | मेरो कथा मेरो भोगाई
लेखनाथ सुवेदी,रुपन्देही / हाल, पोर्चुगल ।
वृद्ध बुवाआमा, जीवन संगिनी, साथीभाइ र जन्मभूमि सबै छाडेर अमिलो मन बनाएर भक्कानिदै परदेशिने रहर कसको हुन्छ र सरकार ?
विश्व कोरोनाको संकटबाट भयभित हुँदा प्रवासमा लाखौं नेपाली युवाहरु अहिले डरैडरको जीवन बिताइरहेका छ्न । हरियो पासपोर्टमा वैदेशिक रोजगारीको प्रवेशाज्ञा लिएर हजारौं युवा आफ्नो सुनौलो भविष्यको सपना सजाउँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जहाज चढ्छन् ।
घरपरिवारको लागि केही गरौंला, दुई छाक भए पनि मिठोमसिनो खाउँला, एकसरो कपडा भए पनि लगाउँला, आफ्ना बाबुनानीहरुलाई राम्रो शिक्षा दिउँला, उनीहरुको सुनौलो भविष्य बनाउँला, चाडपर्व र खुसीयालीमा आफ्नो घर परिवारमा केही थान भए पनि खुसीका पार्सल पठाउँला भन्दै मिठो सपना बोकेर परदेशिएकाहरुको जीवन परदेशमै पो सकिने हो कि ?
लाग्छ ती सुनौला सपनाहरुमा डढेलो पो लाग्ने हो कि ? घर, परिवार र साना ती नाना बचेराहरुका खुसी माटोमै मिसिने पो हुन् कि ? यस्तै–यस्तै अनेक पीर र डरैडरको जीवन बिताइरहेका छन्, मजस्तै हजारौँ नेपाली युवाहरु परदेशमा ।
भोक ठूलो कि रोग ठूलो ? रोजीरोटीको लागि विदेशिनु रहर थियो या बध्यता ? अहिले लाखौं युवाको मनमा यही प्रश्न खड्किरहेको छ । आफ्नो गाउँठाउँ, परिवार र साथप्भाइबाट टाढा रहेर यो परिस्थितिमा अभाव झेलेर परदेशमा बस्न कसलाई रहर होला र सरकार ?
सबै सपनाहरु अहिले एकै ठाउँमा कुन्ठित छ्न् । काम गुमेको छ । दिनरात व्यस्त देखिने बाटोहरु सुनसान छ्न् । भिडभाड देखिने रेस्टुरेन्ट, होटेल, बार र सुपरमार्केट्हरु सबै बन्द छन् । समाचारमा देखिएझैं विश्वलाई नै आतंकित पार्ने गरी मान्छेहरु मरिरहँदा, अभाव र संकटका कुरा सामाजिक सञ्जालमा आइरहँदा परदेशीका मनहरु पनि आतंकित भएका छन् । परदेशीका सपनाका दियोहरु अहिले निभेका छन् ।
यो विपतमा परदेशमा भन्दा आफ्नै देशमा सुरक्षित हुने आशामा आफ्नो देश फिर्ता हुँदै गर्दा सिमानामा भोकभोकै बस्न बाध्य हजारौँ युवाहरुका आवाज किन सुन्दैन सरकार ? आफ्नो नागरिकलाई आफनो देश भित्रिन दे भन्दै सरकारसँग बिन्ती गरिरहेका आवाजहरु र ज्यानको बाजी लगाएर महाकाली नदी तर्दै गरेका दृश्यले कसको मन नछोला र ?
राज्यलाई संकट पर्दा नागरिकले देश बचाउनुपर्छ । आफ्ना नागरिक समस्यामा पर्दा त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।
परदेशिएका नेपाली रेमिट्यान्सका माध्यम मात्रै होइनन्, परिवर्तनका आधार पनि हुन् । यो विपत्तीमा स्वदेश फिर्ता हुन चाहने नेपाली नागरिकलाई अवरोध नगरियोस् । राज्यले समय र परिस्थिति अनुरुपको व्यवस्था गरोस्
भारतमा काेराेना : सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या सात लाख नाघ्याे
महिला कुटपिटको भिडिओ अछामको नभइ महाराष्ट्रको : प्रहरी
काठमाण्डौमा शटर फोडेर सुनचाँदी चोर्ने गिरोह पक्राउ
पशुपति क्षेत्रको सौन्दर्यता बढाइने
कोरोना महामारीकै बीच पर्यटकका लागि खुल्यो यूएई, यी नियम अनि...
अनलाइन कक्षा मात्रै लिइरहेका विदेशी विद्यार्थी अमेरिका बस्न नप...
विदेशमा रहेका नेपालीमा कोरोना : मध्यपूर्व र अफ्रिकी देशमा सङ्...
ओखलढुङ्गाका सङ्क्रमितको जिल्लामै उपचार हुने
निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि ज्युरिचसँग आशयपत्र माग
ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता चल्दै